Ogaden News Agency (ONA) – Gumeysiga oo qowmiyadaha Oromada iyo Somalida iska horkeeni raba isago kagahortagaya kacdonka Musliminta
Gumeysiga oo qowmiyadaha Oromada iyo Somalida iska horkeeni raba isago kagahortagaya kacdonka Musliminta
Warar ayaa sheegaya in ciidamada Gumeysiga Ethiopia ay rabaan inay ka kiciyaan daggaalo u dhexeeyo beelo si bulshada gumeysiga Ethiopia kuhoos jirta isugu mashquusho dhexdooda. oo Dhimashada iyo kala wareega siyaasi ee Males Zenawi iyo Tigreega ku yimid dadka lagasii jeediyo. Sidoo kale waxa la sheegaya kacdoonka Muslimiintu ka bilowday Magalada Addis Ababa oo kusii fiday dhulka Muslimiintu goonida u daganyihiin sida Dire Dawa looga cabsi qabo innuu gaadho meelo kale oo badan. Sidaas awgeedna lagu damin karo kacdoonkan haddii la abuuro daggaalo dhex mara Qowmiyadaha Somalida, Oromada, Canfarta iyo kuwa kale ee laiska hor keenikaro oo idil.
Hadaba Magaalada Baabili ayaa waxa lagu soo waramaya maanta Ciidamo kasocda Liyuu Poliska Oromada iyo Liyuu Poliska Hawaarinta inay xabado isku rideen iyaga oo halkaas dhimasho 2o qof ah lagusoo shegay labada dhinacba. dadka meeshaas ku dhintay ayaa wali xaqiiqdooda nasoo gaadhin inay ahayen dad shacab ah iyo inay iyaga dhexdooda yihiin.
Waxii kasoo kordha wararkan dib ayaan idinkala socodsiin doona.
qorshahan Gumeysiga ayaa dib idiinka soo gudbin doona. Intaas kahor waxa hoos ka aqrisataan Filim iyo kacdoonki Jimcaha ka bilowday Addis Ababa
Mudahaaradkii ka bilowday magalada Addis Ababa Jimcahi ayaa ka bilowday kadib markii shacab aad u badan oo Muslimiin ah ay kusoo tukadeen Masaajidka Al Anwar oo ah masaajida ugu weyn Geeska Afrika. Waxa hadaba magaalada Addis ababa iyo Masaajidka hareerihisaba sidoo kale soo buux dhaafiyay Ciidamada Woyanaha oo ku labisan Hubka iyo qoryaha ciqaabta, iyaga oo dhamaan irridaha waaweyn ee Masaajidka hortaagan qofkasta oo masaajidka galayana baadhaya. Waxa taas kasii horeysay in dhamaan Gudiyadi matalayay Ummada muslminta ah ee Magaladaas xabsiga loo taxaabay kuwana lagu amray inaysan gurigoda ka baxi karin.
Hadaba Muslimiinti masaajidka kuso tukatay ayaa aad moodaysay inay wax isku soo oggaayeen iyaga oo go’ansaday inaysan hadlin oo aamus ku tukadaan aamusna kusoo baxaan. iyaga oo amusana ay is hortubaan masaajidka hortiisa. Balse qorshahan aamuska ah ayaa waxaa isku dayay Imaamka Masaajidka oo markii hore lagu tirinayay nin waafaqsan aragtida shacabka innuuba billaabo cey iyo dhaleecayn markii uu aqrinayay Qudabada. taasina waxay keentay in sahcabki islaamka ahaa ee masaajidka u yimaday salaada inay hal mar qeylo iyo Takbiir ku dhufteen Allaahu Akbar Allaahu Akbar, nin kamid ah dadkii masaajidka ku tukanayayna uu hanjabaada Imaanka ka jawaabay oo uu u sheegay Allaah ka cabso wadaadyahowni.
Waxa muddo qaadatay in Qudbadi hakad gashay oo la isku dayo in dadkii mar kale ku noqdaan aamuskoodi. Maalinimadi Jimcaha ayaa hadaba dadku waxay salaada waqtigeedi markay dhamatay bilaabeen inay aamusaan oo aysan wax takbiir ah laga sameyn masaajidkan oo markasta oo salada la tukado laga qaadi jiray Takbiir.
Waxaa dadku iyaga oo gacmaha isheysta ay is hor tubeen masaajidka waxayna gacmahooda sidii qof garba duub loo xidhay oo kale ay muujinayeen inay xidhanyihiin. Marmarna waxay kor u qaadayeen gacmahooda oo istalaabsan sidii qof xidhan oo kale.
Hadaba hoos ka daawo filim muqaal ah iyo cod luqada Axmaariga ka hadlaya oo Walaalo muslimiin ah ay kasoo diyariyeen Banaanabxii Jimcaha. Iyo sida dadka muslimiinta ah ee Addis ababa ku nool moralkoodu u sareyo cabsina aysan ka qabin Ciidamada Guemysiga.